कृषकलाई प्रांगारिक कृषि उत्पादनमा अग्रसर गराउँदै स्थानीय सरकार
झापा । पूर्वकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसमा पनि अग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएकै कारण बिर्तामोड नगरपालिका अहिले कृषि उत्पादनका हिसाबले आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । नगरपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत राजेन्द्र कडरिया कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरेकै कारण नगर अहिले तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
स्थानीय तह पुनः संरचनापछि बनेको बिर्तामोड नगर सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मै कुल बजेटको ७ दशमलव ४७ अर्थात् रू. १ करोड ७५ लाख बजेट कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्ट्याएको थियो । आव २०७५/७६ मा रू. १ करोड ८० लाख, आव २०७६÷७७ मा रू. १ करोड ९० लाख र चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. १ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षसहित स्थानीय सरकार सञ्चालनको चारवर्षे अवधिमा नगरको कुल बजेट रू. ३ अर्ब ६ करोड ८४ लाख ८० हजार छ, जसको २ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् रू. ७ करोड २५ लाख नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ । बिर्तामोड नगरपालिकाका नगरप्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले स्थानीय तह निर्वाचनताका नै अग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । आफ्नो चुनावी एजेण्डालाई स्थापित गर्न र नगरवासीको दिनचर्यासँग जोडिएको महŒवपूर्ण पाटो कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न योजना उनले ल्याएका छन्, जसको परिणाम अहिले नगरपालिका कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको हो । नगर क्षेत्रमा हुने अधिकांश कार्यक्रममा नगरप्रमुख शिवाकोटी अग्र्यानिक कृषिका विषयमा जोड दिएका छन् । अग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि नगरपालिकाले ‘मेयर विषादीमुक्त नगर कार्यक्रम’समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । रासस